यो उमेरमै २३ जना बच्चाहरुको आमा बनिन् ! काठमाडौंको एउटा घरमा यस्तो भयो हेर्नुस (भिडियो सहित) – Etajakhabar
यो उमेरमै २३ जना बच्चाहरुको आमा बनिन् ! काठमाडौंको एउटा घरमा यस्तो भयो हेर्नुस (भिडियो सहित)
काठमाडौं (शिशिर भण्डारी)समाजमा रहेका दुखी, पिडित र संकटमा रहेका व्यक्तिहरु मात्रै हैन उर्जाशिल र प्रेरणादायि व्यक्तिहरुको भिडियो नयां नयां न्युज नेपालबाट प्रस्तुत गरिहंदा यसको प्रभावले हामीलाई दैनिक सयौं फोन कल आउंछ । हाम्रो भिडियो हेरेर धेरैले प्रेरणा पाउंदै आफु पनि यस्तै कामहरुमा उपत्प्रेरित भईरहेको बताउंदा साह्रै खुशी लाग्छ । यस्तैमा मोडेल तथा कलाकार रुपा लामाले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो -म आफ्नो जन्मदिन कुनै अनाथ आश्रममा गएर त्यहांका भाई बहिनीहरुसंग खुशी साट्दै मनाउन चाहन्छु । हामीले उहा)लाई काडांघारीमा रहेको फ्युचर होप नेपालका अनाथ तथा असाहय भाई बहिनीहरुलाई भेटाउन लग्यौं ।
काडांघारीको फ्युचर होप नेपालमा यस अगाडि हाम्रो युटुब च्यानलको ७ लाख सव्सक्राईभर्स पुग्दा पनि हामी भाई बहिनीहरुसंग खुशी साट्न आएका थियौं । हामी जाने बित्तिकै भाई बहिनीहरु खुशी हुनुभयो । बर्थ गर्ल रुपालाई सबैले जन्मदिनको शुभकामना दिई हाल्नु भयो । फ्युचर होप नेपालकी आमा रिता सिवाकोटी पनि दंग हुनुभयो । सहयोगी मन भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना खुशीका पलहरु आश्रममा आएर भाई बहिनीहरुसंग मनाउंदा रिता मन हर्षित हुन्छ । रिता २३ सन्तानकी आमा हुन् । फ्युचर होप नेपालमा रहेका २३ अनाथ र असाहय भाई बहिनीहरुले रितालाई आमा भनेर सम्बोधन गर्दछन् । रिता र उहां जस्ता नारीहरुलाई हामी सदैव सम्मान गर्दछौं ।
फ्युचर होप नेपालका भाई बहिनीहरुले संस्कार सिक्नु भएको छ । उनीहरु निकै प्रतिभावान पनि हुनुहुन्छ । सबैले हाम्रा लागि यति मिठो गीत गाएर सुनाउनु भयो । भाई बहिनीहरुको मिठो गीत सुनिसकेपछि मोडेल तथा कलाकार रुपा लामाको बर्थ डे केक काट्दै एकैछिन रमायौं । सहयोगी मन भएकी रुपाले आफ्नो तर्फबाट भाईबहिनीहरुलाई खाना पनि खुवाउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १२, २०७६ समय: २१:०२:०१
आखिर किन गइन् त उपमेयर मध्य रातिमा सडकमा ? हेर्नुहोस् देखियो यस्तो सम्मको दृश्य (भिडियोसहित)